BAYBALKU WUU CADDAYNAYAA SINNAANTA RAGGA IYO HAWEENKA - Somali Believers
BAYBALKU WUU CADDAYNAYAA SINNAANTA RAGGA IYO HAWEENKA
Posted by	Abdi Duale on	 Tuesday, 01 April 2014 in Arrimaha Bulshada (Social Issues)
Isla bilowgii bini'aadankaba Kitaabka Quduuska ahi wuxuu caddaynayaa Inuu Ilaahay bini'aadanka ka abuuray u ekaanshihiisa, "Oo Ilaah nin buu ka abuuray araggiisa, Ilaah araggiisa ayuu ka abuuray isaga; lab iyo dhaddig ayuu abuuray (Bilowgii 1:27). Ilaahay ninka iyo haweeneyda labadoodaba wuxuu ka abuuray u ekaanshihiisa, oo labadoodaba wuu karaameeyey, oo barakeeyey, "Oo Ilaah waa barakeeyey iyaga; oo Ilaah wuxuu iyaga ku yidhi, Wax badan dhala oo tarma, oo dhulka ka buuxsama, oo ka sara mara dhulka, oo xukuma kalluunka badda, iyo haadda hawada, iyo wax kasta oo nool oo dhulka kor dhaqdhaqaaqa" (Bilowgii 1:28).
Aayadahani waxay saldhig u yihiin sida uu Ilaahay u arko ragga iyo dumarka; inay labadooduba ka abuuran yihiin u ekaanta Ilaahay, oo ay labadooduba barakaysan yihiin oo labadoodaba la siiyey ama loo diray inay u wada taliyaan abuuritaanka kale ee Ilaahay. Tan waxaa ka sii markhaatifuraya hadalladii ugu horreeyey ee Nebi Aadan yidhi kaddib markii uu arkay haweeneydii uu Ilaahay isaga feedhiisa ka abuuray, "Ninkiina wuxuu yidhi, Tanu hadda waa laf ka mid ah lafahayga, iyo hilib ka mid ah hilibkayga: waxaa iyada loogu yeedhi doonaa Naag, maxaa yeelay, iyada waxaa laga soo saaray Nin" (Bilowgii 2:23). Aadan wuxuu halkan ku caddeeyey inay haweeneydu tahay isaga oo kale - qayb jidhkiisa ka tirsan, hadday noqoto abuuritaan ahaan iyo hadday noqoto sida qiimeynta iyo sinnaanta leh ee ay tahay inuu iyada ula dhaqmoba.
Laakiinse markii ay bini'aadanku dembaabeen, cawaaqibadii xunxumaa ee kaas ka dhashay waxaa ka mid ahaa inay raggii iyo dumarkiiba Ilaahay ka dheeraadeen, oo uu xidhiidhkii ay iyaga dhexdoodu lahaayeena kharibmey ama xumaaday, tan oo keentay inay nimankii bilaabeen inay haweenka xukumaan ama u taliyaan (Bilowgii 3:16).
Kala duwanaanshaha jidh ahaaneed ee ninka iyo haweeneydu kama dhigayo inay labadoodu kala sarreeyaan, ama uu Ilaahay iyaga kala jecel yahay, laakiinse wuxuu tusayaa inay labadoodu yihiin kuwo is kaamilaya sidii uu Ilaahay ugu talogalay.
Isku soo wada duub oo diimuhu si aan qumanayn oo adag ayay wakhtiyadii la soo dhaafay ula dhaqmayeen haweenka. Iyada oo diinta loo isticmaalayo ayaa haweenka laga dhigay kuwo qiimahoodu hooseeyo, oo loogu talogalay in lagu raaxaysto, oo qalbi carruur ah, oo aan lagala tashan arrimaha bulshada ama xataa qoyskoodaba. Haweenku ma helin qiimeyntii uu Ilaahay iyaga ugu talogalay ilaa uu Ciise Masiix ka imaanayey.
Ilaahay laftiisa ayaa haweenka qiimeeyey kaddib markii uu doortay inuu Eraygiisii u soo diro bikro, oo Ilaahay ruuxiisu intuu iyada caloosheeda galo, uu ka dhasho Ciise Masiix - badbaadiyaha dunnidu. Erayadii iyo ficilladii Ciise ayaa iyaguna hoosta ka xariiqay sidii qiimaha iyo qaderinta lahayd ee uu haweenka ula dhaqmay ama u arkey, isaga oo ku dhex noolaa bulsho aan haweenka waxba laga dhegeysan, lana qiimeyn.
Mucjisadiisii ugu horreysey wuxuu uu u sameeyey codsi ay hooyadiis Isaga ka codsatay daraaddiis (Yooxanaa 2:1-11). Ciise wuxuu markii ugu horreysey inuu Masiixa yahay u sheegay haweeney (Yooxanaa 4:25-26). Mucjisadiisii ugu weyneyd ee uu Laasaros ku soo noolleeyey wuxuu ku sameeyey codsigii labadii gabdhood ee Laasaros walaalihiis ahaa ee Maryan iyo Maarta (Yooxanaa 11:1-44). Haween ayaa dhimashadiisii xusay (Yooxanaa 12:1-8). Haween badan ayaa xertiisii ka tirsanaa (Markos 15:41). Haween ayaa aaskiisii joogey (Matayos 27:61). Kaddib markii uu soo sarakacay, haweeney ayay ahayd tii ugu horreysey ee uu Isagu isu muujiyey (Yooxanaa 20:1-16). Ruuxa Quduuska ah isku si ayaa haweenka iyo ragga loo siiyey (Falimaha Rasuullada 1:14).
Dhowr aayadood uun ayaynu ka soo qaadanay. Kitaabka Quduuska ah waxaa ku qoran, "Ma jiro Yuhuud ama Gariig, ma jiro addoon ama xor, ma jiro LAB iyo DHEDDIG, waayo, kulligiin mid baad ku wada tihiin Ciise Masiix. Haddaad tihiin Masiixa kuwiisa, waxaad tihiin Ibraahim farcankiisa oo ah kuwa dhaxalka leh sida ballanku leeyahay."(Galatiya 3:28-29) Ma soo koobi karno sida sharafta iyo qiimaha leh ee uu Ilaahay haweenka Baybalka dhexdiisa ugaga hadlay, iyo siyaalaha kala duduwan ee qushuuca iyo kartida leh ee ay iyagu Ilaahay ugu soo adeegeen intii adduunku jirey.
Waa wax laga naxo in iyada lagu jiro sannadkii 2014 aad maqashid ama akhridid iyada oo la isku haysto qiimaha ay haweenku leeyihiin, iyo inta ay boqolkiiba ragga ka hooseeyaan, sidii ay yihiin alaab meel taalla oo la baayacayo. Burburkii Soomaaliya kaddib haweenka ayaa qaybta ugu weyn ka qaatay welina ka ah badbaadinta bulshada Soomaaliyeed. Waxaa maanta warbixino cilmi ku salaysani xaqiijiyeen inay haweenku saldhig u yihiin xoogsiga, dhaqaalaynta iyo daryeelka qoyska Soomaaliyeed, maadaama ay rag badani ku dhinteen qaarna ka qaxeen dagaalladii sokeeye, halka ay kuwo kalena u go'een cunitaanka daroogada Jaadka, tan oo inay qoyska wax ku soo kordhiyaan iska daaye, wiiqday dhaqaalihii qoyskaskooda.
Ilaahay ma barakaynayo bulsho qaybta dadkeeda ugu tirada badan u aragta dad qiime hoose leh, oo aan iyaga siin xuquuqdooda oo buuxda.